Kujeka Kunorwisa Buzzwordsmithiness Pane Kubata | Martech Zone
Shamwari yangu yakanaka kwemakore mazhinji ndeye Steve Woodruff, anozvizivisa (uye ane tarenda kwazvo) Kujeka Mubatsiri, Inoenderera mberi nekugovana kumwe kushambadzira-kutaura pakati pemawebhusaiti uye enhau enhau. Akagovana zvake nguva-yese yaunofarira neni kubva makore mashoma apfuura:
Isu takapayona modhi nyowani yekusimudzira, inotungamirwa nevatengi inotungamirwa zvichibva pamisimboti yeakaomarara adaptive masisitimu. Aya ndiwo marongero matsva ezano renyika iri kuita shanduko yakadzika: fungidziro dzakasiyana pamusoro pekugadzira kukosha, nzira dzakasiyana kumusika uye kusimudzira bhizinesi, imwe fomati yekuona uye kufunga. Ecosystems ndiyo hwaro hutsva hwemakwikwi. Iwo makambani ayo anoziva kuzviisa pamwe nekuzvibata ivo pachavo semapuratifomu ekuzvisarudzira-kwavo anogona kuita Google-senge kukura kunenge template inotyairwa
Izvi zvinorevei? Akawanda mazwi uye ini handina kana chekuziva.
Ndanga ndichireva kunyora ichi chinyorwa kwenguva, uye nezuro imwe shamwari yangu yakanaka, Maka Schaefer, ndiyo yakakonzera. Maka Akagoverana iyo yakashambadzirwa Palmolive byline, Kurwisa Girisi paKubata.
Nekudaro zita reichi positi… Ndinovimba Maka haazvinetse kuti ndakaba zano kubva kune yake Facebook posvo. Ah, uye zvinofanirwa kucherechedzwa kuti dunhu raMark riri businessgrow.com… Zvinosvika pakujeka kupfuura izvozvo?
Kugovana kwaSteve munharaunda kwave kuri kurovera kwandiri kweanopfuura gore. Yedu webhusaiti webhusaiti yaive muunganidzwa weyakajairika buzzword phraseology iyo inogona kupenya inoshamisa kwazvo bullshitter. Pese Steve paakagovana chirevo chisina maturo kubva pawebhusaiti, ndaizviwana ndichivhura bhurawuza kuti ndive nechokwadi chekuti haana kuiwana kubva DK New Media!
Nekuda kweizvozvo, ndakakurudzirwa sunga peji rekumba. Ndakaenda mumusoro mangu kuti nei makambani achiramba achishandisa agency yedu, uye zvese zvakauya kuchinhu chimwe… tinogadzirisa zvakaputsika nekutengesa kwavo pamhepo. Asi hazviwanzo chinhu chimwe chete… dzimwe nguva iko kumakisa kwavo, dzimwe nguva kopi yavo, dzimwe nguva yavo yekutsvagisa chinzvimbo. Nekuda kweizvozvo, ini ndakanyora yakanaka shoma script iyo inongotsiva izwi rimwe chete mumutsara.
Iyo verbiage nyowani, yakatsanangurwa nekujeka, ndeiyi:
Yako Dhijitari Kushambadzira Hakusi Kutyaira __________. Tinogadzirisa izvozvo.
Mazwi atino jekesa ndeaya Mhedzisiro, Mukurumbira, Chinzvimbo, Vashanyi, Chiremera, Kutungamira, Vateveri, Revenue, Kurodha pasi, Engagement, Sign-Ups, ROI, Tarisiro, Shanduko, Kuverenga, Kushandisa, Vanoona, Upsells, Fans, Performance, Sales, Kuchengetedza, Kunyoresa, Kubhadhara, Kuzivisa, uye Kuda.
Ehezve, ini ndinogona kutumbuka nezve yedu yakaratidza, patent-yakamirira maitiro ekuwedzera kukura kwekushambadzira kwevatengi vedu (nyaya yechokwadi)… asi chii chaizvo icho icho chaizvo zvinoreva? Zvakanaka, zvinoreva kuti tinogadzirisa izvo zvisiri izvo. Mukati mekubata kwese kwatinako, ndizvo zvinotarisisa uye zvatiri kuda kuti vatengi vedu vatarisewo. Tinoda kuona kuti tirikuda kuona pakakoromoka mumazano avo ekushambadzira, nekuvabatsira kuzadza izvo zvipenga kufambisa bhizinesi ravo kumberi.
Ini handizive kuti kurovedza muviri kuti usvike pakutaura, chirevo chakajeka chaive chekubvisa kana kudzikisa mazwi. Icho chingave chiitwa chingakubatsira iwe kuunza kujekesa neyako wega yekutengesa uye yekutengesa zvinhu. Ini ndinotenda maitiro andakaenda kuburikidza aitarisisa pane zvatakakwanisa kune vedu vatengi pane kutarisa pane zvatiri uye zvatakakwanisa. Makore apfuura, ini ndainyorera nezve tekinoroji makambani nguva dzose kushambadzira maficha pamusoro pezvakanaka.
Paunotarisa pane zvaunokwanisa kwete pane zvaunoitira vako vatengi, ini ndinofunga ndipo panguva yekumisikidza mazwi!
Tags: simbakuzivaZvakajekakutendeukacopywritingKudaDownloadsKubatanaFansvateverizvinoisaMaka SchaefermutambobatsirotarisirokueraKuverengakunyoresambirikiroResultskuchengetwaRevenueRoyiKugonesa KugonesaSign-UpsSteve WoodruffZvinotengesaUsageVataririvashanyi
Ini ndinoda izvo zvawakaita neiyo saga peji - kunyanya iyo "carousel" yekuchinja mazwi, yaive pfungwa yandisina kumbobvira ndafunga kare. Bravo!
Jeffry Pilcher | Iko Kwemari Brand
Vashambadziri muzvinhu zvevatengi / zvemumba vanonzwisisa kuti izvo zvauri kutengesa zvinofanirwa kugadzirisa matambudziko evanhu. Kushambadzira kwako kunofanirwa kutsanangudza dambudziko uye nekupa mhinduro zvakanaka - kazhinji mune mashoma iwo mashanu-5 mazwi. Neimwe chikonzero, vatengesi veB10B havanzwisise izvi. Uye muzviitiko zvakawanda, meseji dzakashambadzirwa kwazvo dzekutengesa dzinouya kubva kune idzo dzekutengesa mhinduro.
Vakuru vakuru nevanyori vekukopa kumakambani ekushambadzira vanoda chihombe terminology nekuti chinoita kuti basa ravo rinzwike zvakanyanya (uye vanofunga kuti vanogona kuribhadharira zvimwe). Kutendeseka, vazhinji vanoshaya kujeka kwechinangwa uye havana chivimbo chekuita zvipikirwa zveushingi - semuenzaniso, "Tichakubatsira kugadzirisa dambudziko X."
Kana iwe usingakwanise kundiudza - muchirevo chimwe uye muchiRungu chakajeka - zvauchandiitira, bhizinesi rangu kana mhuri yangu, saka une basa rakawanda rasara raunofanira kuita.